खेलाडी जीवनकाे उत्तरार्धमा रहेका गाेथे भन्छन-'अन्तिम साग खेल्ने इच्छा छ' | | Neplays.com
फाेटाे: उनकाे फेसबुकबाट
नेपाल टेबल टेनिसमा चर्चित नाम हो सिबसुन्दर गोथे । नेपालका लागि दक्षिण एशियाली खेलकुद सागमा पदक जितेका गोथे पछिल्लो पटक टेबल टेनिसबाट केहि टाढीएको जस्तै आभाष हुन थालेको छ । नेपालका नम्वर वन टेबल टेनिस खेलाडी समेत रहिसकेका गोथेले देशका लागि तीन वटा सागमा प्रतिस्पर्धा गरिसकेका छन । आसन्न राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा गोथेले एपीएफबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भएका छन । तिनै खेलाडी शिबसुन्दर गोथेसँग नेप्लेजले गरेको कुराकानी:
आठौं राष्ट्रिय खेलकूदको तयारी कस्ताे भइरहेकाे छ ?
पहिला पहिलाको प्रतियोगिताको जस्तो छैन् । तर त्यो भनेको कन्फिडेन्स लेभल कम भएको चाँही होइन् । एपीएफबाट यस पटक पनि खेल्दैछु ।
तपाईको प्रतिस्पर्धा कोसँग हो ?
अहिलको नतिजा अनुसार स्यान्टू श्रेष्ठ माथि नै छ । त्यसको मतलब स्यान्टूको प्रतिस्पर्धी नै छैन भनेको होइन ।
ट्रेनिङ कहाँ गरिरहनु भएको छ?
मैले आठौं राष्ट्रिय खेलकूदका लागि भक्तपुरमा गरिरहेको छु । यसैगरी लैनचौरमा पनि गएर ट्रेनिङ गर्छु । एपीएफमा त टेनिस खेल्ने ठाउँ नै छैन ।
नयाँ नयाँले कत्तिको चुनौती दिएका छन् ?
नयाँ खेलाडी आएर चुनौती दिए भन्दा पनि आफैले सोँच्ने बेला आयो । खेल्न सक्छु भन्ने लाग्दासम्म खेल्छु । अहिले नै कुनै पनि प्लानिङ गरेको छैन । मेरो सोँच भनेको ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्ने छ । अहिले घोषणा भएको मिति अनुसार साग आयोजना भयो भने यो साग खेल्छु भन्ने आशा छ । आठौं, दशौं, एघारौं र बाह्रौं साग खेले अब तेह्रौं साग खेल्ने धोको छ । मैले नवौं साग भने मिस गरेको थिए । नवौं सागमा भने छनोट भएन् । नवौं साग आयोजना हुँदा दुई पटक छनोट खेल भएको थियो । पहिलो पटक छनोट भए गेम भएन् । एक वर्ष पछि अर्को छनोट भयो त्यतिबेला छानिन सकेन ।
टेबल टेनिस खेलेर के पाउनु भयो ?
म जेछु जहाँ छु त्यो देन टेबल टेनिसकै हो । त्यतिबेला यो खेलमा नलागेर अरु काम गरेको भए पनि राम्रै ठाउँमा पुगिन्थ्यो होला । मेहनत गरेर अघि बढिन्छ भन्ने सोँच भए पछि अघि बढ्न सकिन्छ । म खेलकूदमा लागेर हामीले हैसियत अनुसारको मान सम्मान पाएका छौं । मैले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय खेलहरुमा सहभागीता जनाएको छु ।
कोचिङ कहाँ कहाँ गरिरहनु भएको छ?
लिटिल एञ्जल र समय समयमा भक्तपुर नगरपालिकामा गरिरहेको छु । यतिका समय टेबल टेनिसमा विताए अब मेरो सोँच भनेको सक्रिय खेलाडी जिवन पछि प्रशिक्षक हुने नै हो । टेबल टेनिसमै रहिरहने हो भने प्रशिक्षक वा यसैको व्यवस्थापक नै हुने हो । यसको मतलब म हुन्छु भन्दैमा बनि हाल्ने अवस्था छैन । कुन लेभलको खेलाडीलाई कहाँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने राज्यको नीति पनि हुन जरुरी छ । यहाँको सिस्टमले खेलाडी प्रशिक्षक हुन्छु यसैमा थप योगदान गर्छु भन्दा पनि पाएको छैन । तर खेलाडीलाई ठाउँ दिनु पर्छ । नत्र भने खेलकूदलाई नै घाटा हो ।
यूएस ओपन टेनिसकाे तयारी सुरू गरे नाडालले
न्यूजिल्याण्डमा जुन ३ तारिखबाट टेनिस सुरु
फ्रेन्च ओपन र यूएस ओपनकाे मिती नजुध्ने
ओसाका बनिन धेरै कमाउ टेनिस खेलाडी
अष्ट्रेलियन महान टेनिस खेलाडीको निधन
दर्शकबिना यूएस ओपनकाे उपाधि जित्नु अर्थहिन-मरिन